Daawo: Dagaal ba’an oo dhexmaray kooxaha qaranka Imaaradka iyo Malaysia – Somali Integration Tv
Daawo: Dagaal ba’an oo dhexmaray kooxaha qaranka Imaaradka iyo Malaysia
Waxaa qoray Abdiaziz Hassan	 La dabacay Maanta Aug 12, 2018 0
(SITV-DUBIA):_Ururka kubada cagta ee Malaysia ayaa sheegay inuu dacwad u gudbin doono Midowga kubada cagta ee Asia oo uu ka cabanayo kooxda kubada cagta ee uu leeyahay qoyska Imaaraadka Carabta.
Dacwadan Malaysia ayaa waxay ku saabsan natiijada dagaal uu bilaabay mid kamid ah kooxdan qoyska Imaaraadka oo haraati ku jiiday mid kamid ah ciyaartoyga Malaysia oo labadan kooxood ay ku dhexmaraysay ciyaar saaxiibtinimo oo ka dhacday caasimada Kuala Lumpur dalka Malaysia.
Gegeda ciyaaraha ayaa waxay isku badishay goob dagaal kadib markii ciyaartoyga labada dhinac uu dhexmaray dagaal la isla balaadhay oo aad u ba’an.
Malaysia oo iyadu ku hogaaminaysay 2 gool iyo 0 Imaaraadku lahaa wax yar ka hor dhamaadka ciyaarta ayaa waxa dagaal bilaabmay ciyaartoyda labada kooxood oo uu sababay ciyaaryahan katirsan kooxda qoyska Imaaraadka oo lagu sheegay magaciisa Maxammed Khalfaan alXarrasi kaasoo weeraray ciyaaryahan Malaysian ah oo magiciisa lagu sheegay Caabid Zaynu-diin Cabeednegoo iyo haraati qadka dhexe lugaha.
Waxa sido kale dagaalkan kusoo biiray ciyaartoyda kaydka ee katirsan kooxdak qoyska Imaaraatiyiin ah iyo maamulka kuwaasoo weeraray kooxda Malaysia,taasoo oo gegedii ciyaarta u rogtay goob dagaal ba’ani ka dhacay.
Halkan ka daawo muuqaal kooban oo ku saabsan dhacdada dagaalkan ee ay sababtay kooxda kubada cagta ee uu leeyahay qoyska Imaaraadka.
Madaxweynaha Turkiga oo ku dhawaaqay hanjabaad ka dhan ah dhaqaalaha Mareykanka
Isku aadka Ciyaaraha Champions League oo la sameeyay
Sergio Busquets oo heshiis waqti dheer ah u saxiixay Barcelona
Hordhaca kulanka Man Utd vs Brighton
Shirkada Hyundai oo muddo saddex sanno ah Isboonsar gareeyn doonta kooxda Roma